SADHANA KALE - Arun K Subedi
बृहत् महानगरी बम्बे, अंधेरी इष्ट, नन्द बहुराष्ट्रिय कम्पनी, खाद्य उत्पादन इकाई सबै भन्नु पर्दछ । नम्बर पनि अन्यथा यस महानगरीमा कहाँ पुग्नु पर्ने कहाँ पुग्छ÷पुगिन्छ । मिस्टर दयानन्द नाड्कर्नीले मलाई चेताबनी दिदै भन्यो । जति पटक कुरा ग¥यो प्रसंग÷अप्रसंग उसले आफ्नो नाम लिइरहेछ, त्यो पनि मिस्टर सहित् । घर पनि उसको भोर्सवा जुहु र अंधेरी वेस्टको बीच,बान्द्रा्रको नजिक मैले सोध्न नै परेन । किन कि भोर्सवामा बस्नु आफैमा गर्वको कुरा हो । जुहु चौपाटी (समुद्र किनार) सभ्रान्त इलाका, महंगा होटल र रेष्टुरेन्ट यही छन् । बम्बे यूरोप र जुहु पेरिस हो । यही सुपर स्टार अमिताभ बच्चनको घर छ । भोर्सर्वा वान्द्रा भएर पनि जान सकिन्छ । यहाँ राजेश खन्नाको निवास पर्दछ मिस्टर नाडकर्नीले जया÷ अमिताभ, राजेश÷ डिम्पललाई कतिपटक भेटेकोछ । यसै त अरु स्टारहरु पनि बस्छन् तर वास्ता गरेर साध्यै हुन्न । ऊ यस नन्द खाद्य उद्योग कंपनीको प्रमुख केमिस्ट । यस्तो बुलन्द मानिस संग भेट भएकोमा म अवाक् भएं । अवका एक महिना मैले मिस्टर नाड्कर्नीकोे अधिनमा रहि गुण नियन्त्रण तथा उत्पादन ब्यवस्थापनको तालिम लिनु पर्नेछ ; यो भव्य पात्र मेरो गुरु हुनेछ ; र म “ट्रेनी” । एक छेउमा बसेर बुरेटको अंक हेर्दै क्याल्कुलेटर थित्दै गरेकी युवतीले जो एैले सम्म मौन थिई म तर्फ हेरेर छोटो मुस्कान मुस्काई नाडकर्नीको बडप्पन वा मेरे हुस्सुपन केलाई हो त्यो स्मीत मुद्रा पक्का ब्यांग्य कसी रहेथ्यो । कुरा नाडकर्नीलाई पनि असहज लागेछ । आफ्नो धारा प्रवाह “र” (च) प्रधान भारतेली अंग्रेजी बीचैमा रोकेर उसले परिचय गरायो “सी इज साधना काले, क्वी सी.ओ., वर्किेङ अण्डर मी” (तिनी साधना काले हुन ; गुण नियन्त्रक अधिकुत मेरो माताहातमा काम गर्छिन् ।) मैले “हेलो” ले उनको परिचयको जवाफ दिएँ, उनले पनि स्मीत मुद्रामा “हेलो” भनिन् यसरी सकियो मेरो पहिलो दिन ।
अब समस्या थियो मेरो बासको, उसले एउटा गोर्खाली दरवानलाई बोलायो र उसकै भाषमा म “नेपाली जनाव”को झिटीगुन्टा बोकेर कारमा रखायो । हामी जब उद्योगको कारखाना भवनबाट हिड्रयौं । हामी दर्पण टाकिज तर्फ लाग्दैछौं त्यस पछि “ओभरहेड ब्रिज” पार गरेर “वेस्ट लाइन रेल्वे” पार गरेर नवरङ्ग “टाकिज” पुगिन्छ । म बस्ने होटल त्यही अंधेरी वेस्टमा रहेछ । उसले अरु अरु कुरा पनि ग¥यो जो मेरा निमित्त महत्वका थिएनन् । उसलाई अंग्रेजी बोल्न गाह्रो परिरहेको थियो तथापी अंग्रेजी नै बोलिरहेथ्यो । भारतेलीहरुलाई अंग्रेजी बोल्दा ठूलो भइन्छ भन्ने लाग्दछ । भारतेलीहरुलाई आफु जानिफकार र ठूलो देखाउन साह्रै हतार लाग्दछ । भारतेलीहरुले सबै भन्दा नजानेको कुरा भद्र हुनु हो । संन्सारमै आफूलाई सबै भन्दा भद्र बन्न रुचाउने अंग्रेजहरुले २०० बर्ष भन्दा बढी शासन गर्द पनि भारतेलीहरुलाई भद्रता सिकाउन सकेनन् । र सोही संस्कारको प्रतिमूर्ती हो नाडकर्नी ।
हामी होटलमा पुग्यौं । आफ्नो परिचय पट्टट(बिजनेश कार्ड) दिंदै उसले आफ्नो परिचय दियो मराठीमा र मेरो आतिथयका लागि पालना गर्नुपर्ने नियमहरु फलाग्न थाल्यो । वहाँ विश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपालको ब्राहमण परिवारको हुनुहुन्छ, बहाँलाई साकाहारी भोजनको विशेष प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ । हिन्दुस्तानीहरुलाई बढ्ता बाठो हुनुपर्छ । अपरिचित ब्यक्तिलाई खाना सम्बन्धि त्यत्ति ठूलो वर्जना तेछ्र्याइदियो नडकर्नीले । म रोज पिउन र मासु खान मन पराउनेलाई यहाँ भन्दा कठोर अनुशासन केहि हुन्नथ्यो तर लाज बचाउन पनि मैले साहाकारी नै
हुनुप¥यो । नाडकर्नीलाई आफ्नो जात भनेकामा मलाई पस्चताप पनि भयो यो हिन्दु संस्कृतिको कोर नै भयो; जातपात पनि संस्कारमा जस्तो भए पनि जातको पुछर कहिल्यै नछाडीने मलाई दिक्दार पनि लाग्यो । यसरी मानिसको प्रकृति नबुझी लादिने बडो भद्दा स्वभाव हुन्छ भारतेलीहरुको ।
म बिहानै कारखाना भवन पुगेर प्रयोगशाला पसेँ साधना आएर काममा जुटिसकेकी थिई हामीले प्रातकालिन अभिवादन साटासाट ग¥यौं । माफ गर मलाई एकदुइवटा माइक्रोवायोलोजीकल मिडिया तयार पार्नुछ केहि परिक्षण हरुका लागि । ऊ चुम्बकीय मदानी (म्याग्नेटिक स्टिरर)लगाएर कोनिकल फ्लास्कमा कुनै घोल तताइरहेकी थिइ । उसका आवाज र मुस्कान निकै आकर्षक थिए । यसै उसको अनुहारमा पनि तरुनीमा प्रेरित हुनु पर्ने सौन्दर्यता प्रचुरनै थियो । समय केहि खस्की सकेको थियो तर नाडकर्नी आफै आइसकेको थिएन । नाड्कर्नी महा प्रबन्धकको सालो रहेछ । ठूलो ठालुको नातामा परेपछि दक्षिण एशियालीहरुलाई अनुशासनले त्यत्ति धेरै बाँध्दैन त्यस कारण यस्को ढिलाइलाई वास्ता गर्ने कुरा भएन । तर एक्लै प्रयोगशालामा धुम्धुम्ती बस्नुु कष्टप्रद भै रहेको थियो मलाई । एक घण्टा पछि बल्ल आयो मिस्टर दयानन्द नाड्कर्नी मैले उठेर उसलाई अभिवादन गरेँ मलाई चाहिएको थियो मेरो तालिमको निर्देशिका तर मेरो यो मागलाई उसले वास्ता गरेन । अब सुरु भयो उसको यात्रा बृतान्त, किन ढिलो भयो ?उसको गोलमटोल स्पष्टिकरण चुप्पी साधेर सुनी नै रहेँ । कुरा के थियो भने शिव सेनाको केहि जुलुस थियो । ट्राफिक रोकियो अनि त्यस्तो भयो । शिव सेनाको जुलुसले सुरु गरायो छत्रपति शिवजीको प्रसंग ।
हिन्दु मराठीलाई छात्रपति शिवाजी भन्दा ठूलो अस्तित्व केवल भगवान गणपतिको मात्र छ । दिल्लीको सल्तनत औरंगजेवले संहालेको वेलामा छत्रपति शिवजीसंग घमासन युद्ध भएको थियो । त्यसवेला शिवाजीका पुरोहित थिए नाडकर्नीका पुर्खा । शिवाजीका पुरोहित भएकाले ब्राहमण भए पनि लडाकु थिए । त्यो युद्धमा उस्का पुर्खाले बहादुरीका साथ लडेका थिए । शिवाजीका उत्तराधिकारी को नि के जाति रावको नेतृत्वमा अग्रेजको विरुद्दमा पेसावारको लडाइमा पनि नाड्कर्नीका पुर्खाले भाग लिएका थिए यति वर्णन सके पछि नाड्कर्नी आफ्नो कुर्सीमा एक फन्को घुम्यो र साधनालाई डाक्यो ।
अब मलाई साधनाले तालिम दिन थाली । कच्चा पदार्थको गुण नियन्त्रण ,उत्पादनको गुण नियन्त्रण इत्यादि नमूना परिक्षण पनि ऊ समानन्तर देखाइ रहिन्थी कोनिकल फ्लास्कमा सुचक रसायन (इन्डीकेटर)को रङ्ग परिवर्तन पनि छिनमै भइरहन्थ्यो । यत्तिकैमा “लन्च”को घण्टी (“साइरन”) बज्यो साधना वास्तवमा नै भद्र र शुसिल छे । उसको ब्यवहार देखेर नै मैले अन्य भारतीयहरुलाई लिएर बनाएको औषत धारण परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ । आफ्नो बंैसको स्वभावीक चापल्यताबाट पनि राम्ररी बचेकी छ साधना । साधना र नाड्कर्नीको टेबलमा घरको लन्च बक्साडब्बावालाल ल्याइसकेका थिए । मलाई चाहि क्यान्टीन जानु थियो । दिउसोको खाना घरकै खाने प्रबन्ध पनि बम्बेको गजबै, अनुकरणीय छ ठूला शहरका लागि । आफ्नो घर जति नै टाढा भए पनि डब्बावालाको सदस्य बनेर मासिक शुल्क तिरे पछि घरमा गएर लञ्चबक्स भेला पारी ठीक समयमा आप्फ्नो कार्यकक्ष मै आइपुग्छ । यति ठूलो जनसमुदमा कहिल्यै ढिलो पनि हुन्न र गल्ति पनि हुन्न ।
खाना पछिका घण्टाहरु केही नाड्कर्नीको पूर्वाभिमानका कथाहरुमा, केटी साधनाका आकषर्णहरुमा र प्राविधिक तालिमका सूचनाहरुमा बिते । ती घण्टाहरु मात्र हैन दिनहरु पनि त्यसरी नै विते , केही दिनहरु छोडेर । यस बिचमा नाड्कर्नीका पुर्खाका बीरगाथा र बुद्धिगाथाहरु धेरै सुनिए ।
भोलि छुट्टीको दिन थियो । के गरेर बिताउने मलाई गाह्रो परिरहेको थियो । मैले आफ्नो समस्या राखें नाड्कर्नीसंग हैन साधना संग, नाड्कर्नीले थाहा नै नपाउने गरी । बम्बेमा हेर्ने नै त्यस्तो उल्लेख्य केही छैन । यो जनसमुद्र हो, सिमेंट र कंक्रिटको जंगल हो , स्पन्दनहीन शरीर हो अलकत्रे सडक यसका धमनीहरु हुन् र निर्जीव मानिसहरु प्राण हुन् । यसर्थ के नै हेर्नलाई सुझाब देओस साधनाले । पातलो आबादि भएको ठाउबाट बम्बे पुगेको मान्छे चर्चगेट र भी.टी. को भीड नै पनि रमिता हुन्छ भनेर हुन सक्छ र भू–परिवेष्ठीत राष्ट्र भएको हुनाले समुद्र पनि रमिता हुन सक्छ भनेर उसले दुवै ठाउँहरु वा चौपाटी (समुद्र किनार) हेर्ने वा जाने सल्लाह दिई ।
मलाई लाग्यो समुद्रिक किनार नै ठिक हुन्छ तर मलाई के थाहा जोडी वा समुह विना चौपाटी (किनारा) हेर्ने वा जानु अशली पाखे पन हो भनेर । यस्तो कच्चा उपदेश गरेकोमा मलाई साधना देखि निकै रीस उठ्यो र अर्कौ दिन अभिब्यक्त पनि गरिहालें म बच्चा छैन वा कच्चा छैन । सायद यो प्रतिकृयाले उस्लाई राम्ररी थाहा भयो होला यसर्थ अर्को हप्ता देखि छुट्टी विताउने अभिभारा उसले लिई म तनाब मुक्त भए ।
हामी संजय गांधीपार्क,इस्सेल वल्र्ड जुहु चौपाटी, इलिफेन्टादेखि लिएर शहरका विशेष भागहरु सबैको भ्रमण ग¥र्यौ एक आर्कामा उन्मुक्त महशुस गरेर । मलाई लाग्यो साधना भारतेलि तरुनी भएर पनि उस्मा गणितिय गुण त्यसरी देखिएन । हामीहरुमा आकर्षण यतिथ बढ्यो कि एक आर्काले सीमा अतिक्रमण गर्न खोज्दा प्रीतकार लाग्न थाल्यो । यस शहरका ४÷५ वटा रविवार निकै सुवास पूर्ण भए । यस यात्राको अति अप्ठेरो क्ष्यण त्यो भयो जब मैले चर्चगेटबाट फिर्दा आफ्नो वालेट वम्बे सेन्ट्रल, दादर कतै हराएं । पैसा धेरै त थिएन, मलाई राम्ररी थाहा थियो भारतमा पैसा धेरै लिएर हिड्नु खतराबाट खाली छैन, तथापी हरायो । यस्को उपाय पनि साधना संग रहेछ । तर जानु पर्ने भयो त्यही नमुना भारतेली बडप्पनको रोगी नाडकर्नी कहाँ ।
कुरा लुकाउनु पर्ने भयो साधनाको साथको यात्राको कुरा ले नाडकर्नी लाई भट्काउन पनि सक्दथ्यो । तर मेरो समस्या भन्दा प्रथमिकताको कुरा उस्को पुर्वाभिमान ठह¥यायो उस्ले आजको दिन चौपट । कुनै नमुना (स्याम्पल) लाई आश्वन (डिस्टीलेसन) गर्दै साधना मधुर मुस्कानले मेरो वाद्ययता प्रति ब्याङग्या कसिरहिथी । कुरा सुन्नै प¥यो ।
नडकर्नीका पूर्खाले छात्रपति शिवजीलाई औरंगजेबले हराएको बदला लिन ठुलो कसरत गरेका थिए । यस्का निमित्त उसका पुर्खा कुलशेखर नाडकर्नी अंग्रेजी सेनामा भर्ती भए । मेजर हड्शनले दिल्लीमा बहादुर शाह जफरलाई आक्रमण गर्दा हड्शनका सब भन्दा विश्वास पात्र थिए कुलशेखर नाडकर्नी । बहादुर शाह जफर कसरी परास्त भयो सिपाही विद्रोहमा ऊ निकै लामो हाँसो हाँस्यो । उस्लाई उस्की बेगमजीनत महल संगै पक्डिएर रंगुनमा लांदा उस्को गार्ड कमाण्ड कुलशेखर नाडकर्नीले गरेका थिए । बहादुर शाह जफरलाई पक्डिएर लिएर जाँदा बल्ल नाड्कर्नीको कलेजो ठण्डा भयो । यो घटनानले नाड्कर्नीलाई गौरवशाली बनायो ।
भारतेलीहरुको मनोग्रन्थी पनि बिचित्रको छ । अंग्रेजसँग लड्दा पनि गर्व नै लाग्थ्यो र आफ्नो राष्ट्रको स्वतन्त्र संग्रामको उत्कर्षमा पुगेको सिपाही विद्रोहलाई क्रुर दमन गरी अंग्रेज साम्राज्यालाई सहायता गरी एक छत्र राज्य सुम्पिएर राष्ट्र पराधीन गराएकोमा पनि गर्व नै छ । बहादुर शाह जफर जस्तो तरल हृदय भएको सुल्तानलाई ८० वर्षको उमेरमा त्यो भुक्तमान दिन तयार हुने हडशनको चर कुलशेखर नाड्कर्नीको सन्तान त्यही राष्ट्र द्रोहीको बीउ त हो दयानन्द नाड्कर्नी पनि । मलाई एक किसिमले घृणा पनि उत्पन्न भयो तथापी उ आफ्नो धारणामा अटल छ दुवै विपरित कुरा ठीक हुन् । भारतेलीहरु यस्तै विरोधाभासपूर्ण मान्यतामा रहन्छन् । सिपाही बिद्रोहको कुरा नाड्कर्नीले गर्नसाथ मलाई नेपालीहरु माथी प्रशिद्ध लेखक खुशवन्त सिंहको दिल्ली भन्ने पुस्तकको टिप्पणीको याद आयो । जंगबहादुर राणाले अंग्रेजको सहयोगका लागि सिपाही बिद्रोह दवाउन नेपाली सेना पठाएका थिए । त्यसै उपर छ उनको टिप्पणी । “गोर्खालीहरुको खप्पर फलामले बनेको हुन्छ र त्यस भित्र गोवर भरिएको हुन्छ । सायद यिनीहरुलाई आमालाई मार र बाबुलाई झुण्ड्याउ भन्दा पनि यता उता नहेरी गर्दछन् । मलाई यहानिर यसको उत्तरमा भारतेली प्रति त्यस्तै टिप्पणी सुझ्यो । भारतेलीहरुले सतकौं सम्म दासत्व भोग्दा भोग्दा यति हिन ग्रन्थी ग्रस्त भएका छन् कि उनीहरुलाई पाइलै पिच्छे बडप्पन देखाउनु पर्छ ।
बल्ल नाड्कर्नी प्रसंगमा आयो उस्ले आफ्नो कार निकाल्यो र हिड्यो । मिले पार्लेमा रोकेर एउटा मानिसलाई निकै समय लगाएर खोज्यो त्यो रहेछ पाकेटमार र उस्को कार्यक्षेत्र मिले पार्ले स्टेशन रहेछ । हामी पुग्यौं दादर एशियाकै सबै भन्द । ठूलो झोपडपटी (स्लम) इलाकामा । त्यो ब्यक्तिले एउटा घर भित्र हुल्यो । यति गल्छिडा पार गरेर जानु प¥यो कि कोही पनि एकै पटकमा बाटो पहिल्याउन सक्दैन थियो होला । अन्ततः एउटा कोठामा उस्ले हामीलाई पसा¥यो “सेल्भ” मा राखिएका असंख्य पर्सहरु मध्येमा मेरो पर्स फेला प¥यो । एक पैसा पनि तलमाथी परेको
थिएन । बम्वेको विशिष्ट पक्ष मध्ये यो पनि रहेछ । यहाँका पाकेट मारको संगठन रहेछ । बम्बेभरीमा मारिएको पाकेटको सारा वस्तुहरु तिनीहरुकै ठाउँमा शुरक्षित हुदो रहेछ । तीन दिन सम्म पनि कसैले कही सूचना नगरे पछि मात्र त्यसको प्रयोग गर्दा रहेछन् । यदि कसैले एकजना मात्र चिनेको भए आफ्नो जेव मारिएको स्थान बताउन सकेमा जस्ताको तस्तै भेटीने रहेछ । पाकेटमारका साथीहरु र परिवारजनको खल्ती साफ हुन सक्ने अवस्था भएकोले यस्तो प्रावधान मिलाएका रहेछन् । जे होस् मेरो पर्स भेटियो । संसारमा नपाईने कुराहरु यहाँ पाइन्छ ।
एवं रितले अर्को आइतवार आयो । यो बीचमा मलाई मेरो ब्यावसायिक दायित्व भन्दा साधनाको वास्ता बढी हुन थालेको थियो । एउटा नेपाली पहाडिया ठिटो बम्बैया तरुनी संग रंगिन क्षण विताउन पाए पछि कतिसम्म उड्दो हो त्यही सिमा सम्म म उडिरहेको थिए । झन यसपालीको आइतवार विशेष आइतवार थियो, शनिवारको राति खाण्डलाको होटलमा र आइतवारको दिन सुन्दर नगर पुनामा । मलाई शनिवार पाँच बजे पर्खन यति हतार भएको थियो कि एक एक पल घण्टौं लामो जस्तो भइ रहथ्यो साधना के भन्दै थिइन् थाहा थिएन । एस.ओन.(कज्ञ) भी वान (खज्ञ) के के उस्को गणित सुत्रको मलाई वास्ता थिएन केवल थियो त खाण्डलाको रातको ।
अन्ततः प्रतिक्षित क्षण आइपुग्यो हामी खाण्डला पुग्यौं । समुद्र किनार देखि एकसय किलोमिटरको दुरीमा रहेको पहाड खाण्डला साँच्ची नै सुन्दर छ । जाडो जाडो पनि लाग्छ यहाँ । बम्बैयाहरुको मोज गर्ने थलो नै हो खाण्डला । हाम्रो कोठा पहिले नै बुक भैसकेको थिएछ । साधनाले गराएकी रहेछी हाम्रो प्रतिक्षको अन्तीम विन्दु समिप थियो । यौंन त्यस्तो विषय हो जस्मा स्त्रीमा चाहना अति हुन्छ तर धैर्यता भने पुरुषको पहिला टुट्दछ । यो पनि बिचित्रनै
हो । म अधैर्य भएँ, उसले आँखा बन्द गरेर शरीर छाडीदिई । एउटी तरुनीसँग जन्मदिनको पहिरनमा म जुट्न पाएको वा खोजेको यो नै पहिलो दिन थियो । पहिलो क्षण थियो, कुन कार्य कहाँबाट कसरी सुरु गर्नु पर्ने हो म उत्तेजनाकै अवस्थामा सोच्दै थिए र स्वभाविक रुपले अग्रसर पनि भइ रहेन्थेँ । अनायस उसले उच्छ्वास नियन्त्रण गर्दै भनि “के तिम्रो घर काठमाण्डौंमा छ तिमीसँग मोटर कार पनि त होला ? आयातित मोटर काठमाण्डौंमा धेरै सस्तो हुन्छ भन्छन् नी ?”मैले थाहा पाए उसकको हात कहाँ छन् । मेरा तरल इन्द्रियहरु जमे झै भए छ्याँ कस्तो भद्दा अनुभुति । अन्ततः भारतेलीहरु मर्महिन नै हुन्छन् यिनीहरुलाई पैसा बाहेक केहीको मर्म थाहा छैन यस्तो अवस्थामा पनि बोल कबोल गर्न गराउन सक्ने धन्य हो । भारतीय नारी मैले केहि दिन अगाडी निर्माण गरेको साधनाको बारेको धारणा सबै गलत साबित भए उ पनि त्यहि पंक्तिमा परी जहाँ औषत भारतेलीहरु पर्दछन् । यौनमा ब्यवसायिकता भएपछि त्यो भन्दा अनाकर्षक कुरा अर्को केही हुन्न विश्वमा । यौंनमा सबै भन्दा परम्परावादीको हद भनेको पनि विहेको अनिवार्य शर्त मात्र हुनु पथ्र्यो नी यस्तो कुरा उपभोग्य साधनाको सापेक्षमा उठाई साधनाले मैले सुनेको थिए पश्चिमेली र अफ्रिकीहरुसंग वृद्धि र शरीर मात्र हुन्छ यिनीहरु घाँटी मुनी जनावर र माथी कम्प्यूटर हुन् । जापानी, चिनीया तरुनीहरु अति तरल हुन्छन् । उनिहरु सँग मन मात्र हुन्छ । बस मन पग्लियो सर्वस्व सुम्पिए तर भारतीय युवति के हो ? यो साधना के हो ? मलाई सुझिरहेको थिएन । मैले उठेर बत्ति बाले, साधना निर्वस्त्र पल्टिरहेकी थिइ आँखा बन्द गरेर चित्त भएकी थिइ । शिर देखी पाउ सम्म अवलोकन
गरें । कोनिकल फ्लाक्सको सुचक(इन्डिकेटर)को रंग परिवर्तन भएझै साधना परिवर्तन भै । जीवनको गुण नियन्त्रणको एउटा टाइट्रेटिङ्ग प्रयोग थियो सायद यो साधना कति विरुप एउटी तरुनी पहिरणमा जति आकर्षक देखिन्छे विना पहिरण त्यत्ति नै कुरुप । उज्यालोमा एउटी आइमाइलाई निर्वस्त्र हेर्नु जस्तो दिक्क लाग्दो दृष्य हरु केही हुदो रहेनछ । मैले भुइमा छरीएका उसका वस्त्रहरु भेला पारेर उसै माथी फालिदिएं । वासनाको उददीपन र आवेग ममा समाप्त भइ सकेको थियो । म नरित्तएरै खोक्रो भइसकेको थिएँ । कपडा लगाए र होटलको बिल फरछ्योट गर्न तल आएँ । रातको १० बजेको थियो म फिरेर आउन्जेलमा उसले कपडा लगाइ सकेकी थिइ
केटि । पाँचसयको नोट निकालेर उसको ब्यागमा हाली दिएं उ उदास भएर सोफामा बसेर चुरोट तानीरहेकी थिइ । चान्सलर, ब्राउनस्टीक किंग साइज तिमीपनि तान्छौं कि उस्ले सोधी, यद्यपी मलाई बोल्ने इच्छा थिएन तर पनि पर्दैन धन्यावाद भनेर म निस्किएं ।
भोलिपल्ट साधना कार्यलय नै आइन र म पनि नाड्कर्नीलाई अनुरोध गरेर कारखाना भ्रमणका लागि पनवेल तर्फ लगेँ मैले पनवेलबाट भोपाल जानुथ्यो र त्यतैबाट नेपाल । दयानन्द नाड्कर्नी र साधना काले सँग यसपछि कहिल्यै भेट भएन न त पत्रचार नै ।